Tantara-KOSMOS Home Textile Co., Ltd.
Ny toeranao ankehitriny: Home>Momba anay>tantara
Jintian Textile (Nantong) Co, Ltd dia naorina tamin'ny 2006.
Jintian textile (nantong) co., Ltd.founded tamin'ny 2006. Tamin'io taona io ihany dia lasa mpamatsy volamena an'i Alibaba i Jintian.
Tao anatin'ny roa taona ho avy, nanangana teny famolavolana maoderina sy rafitra fiasan'ny tsena mahaleo tena i Jintian. Ny fantsom-baravarankely vita amin'ny dantelina vita amin'ny vatosoa dia mahazo fankasitrahana betsaka avy amin'ny mpanjifa.
Tamin'ny 2009, nanatrika ny lanonana lehibe indrindra eran'izao tontolo izao i Jintian - Canton Fair. Jintian dia nahomby indrindra tamin'ny lalao.
Jintian marika KOSMOS tao Shina sy Etazonia tamin'ny 2010. Nalaza i KOSMOS fa nitaingina lamba vita amin'ny dantelina vita amin'ny kalitao avo lenta any an-tsena sy tsena loakaly.
Nanatrika ny fanasan'ny mpanjifa i Jintian dia nanatrika ny fampirantiana lamba an-trano any Dubai. Miaraka amin'ny fomba tsy manam-paharoa sy kalitao tsara indrindra, ny vokatra Jintian dia nanjaka amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita any amin'ny faritra Atsinanana.
Tamin'ny taona 2017, KOSMOS dia niaraka tamin'i Jintian teo amin'ny tontolon'ny lamba soratra tsara indrindra eran'izao tontolo izao - Frankfurt Heimtextil. Jintian dia namoha ny varavaran'ny tsenam-bola eropeana.
Tamin'ny taona 2020, noho ny COVID-19, KOSMOS dia nanandrana ary nahomby tamin'ny fanatanterahana voalohany ny Kanton Fair tamin'ny Internet. Mampiseho ny maodely farany ataonay amin'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny Internet.